पढ्न मन लागेन ? यसो गर्नुहोस् | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य पढ्न मन लागेन ? यसो गर्नुहोस्
२०७४, २० भाद्र मंगलवार २२:०२
अर्कोतर्फ, मन नलागी नलागी कुनै काम गर्दा सो काम पीडादायी पनि हुन जान्छ । त्यसले चैनले बस्न पाउने अधिकार खोस्छ र अन्तमा पढाइ भन्ने विषयप्रति नै नकारात्मक धारणा पैदा गराउँछ । सबैभन्दा खतरनाक पक्ष त बलजफ्ती पढ्दा सिर्जनशीलता नष्ट हुँदै जान्छ । यसै पढाइलाई पढुँपढुँ लाग्ने, पढेर छिटो बुझिने र दीर्घकालसम्म सम्झिरहने बनाउन पाए बिद्यार्थी जीवन कति सुन्दर हुँदो हो ? कति आनन्ददायी हुँदो हो ?
जे होस् हाम्रो मनले आनन्द प्राप्तिका लागि शरिरलाई काम गराउने नै रहेछ । पढेपछि आनन्द पाइन्छ भन्ने विश्वास मात्र दिलाउन सके हुनेरहेछ । पढाइ मस्तीको विषय बन्यो भने त के चाहियो र ? onlinekhabar.com
Previous articleआफन्तको पुण्य तिथीका दिन शेरचन परिवारद्धारा शान्तिकोषलाई सहयोग
Next articleपर्वतबेनीका सरोज सापकोटा दक्षिण एशियाली छनौट प्रतिस्पर्धामा